गगन थापाको प्रश्न : ८ बजेपछि कोरोना घट्दै जाने अनि बिहान बढ्दै जाने तथ्य के हो? – Health Post Nepal
गगन थापाको प्रश्न : ८ बजेपछि कोरोना घट्दै जाने अनि बिहान बढ्दै जाने तथ्य के हो?
२०७८ साउन २८ गते १४:५९
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगन थापाले ‘साँझ ८ बजेपछि कोरोना घट्दै जाने अनि बिहान बढ्दै जाने हो?’, भन्दै प्रश्न गरेका छन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बोलेपछि प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘साँझ ८ बजेपछि काठमाडौंलगायतका ठाउँमा संक्रमण बढ्दै जाने त्योभन्दा बिहान चाहीँ घट्दै जाने यसको वैज्ञानिक प्रमाण, अध्ययन कहाँ भएको छ?’
वर्तमान सरकारले खोपलाई प्राथमिकता दिनु प्रशंसनीय कार्य भएको भन्दै व्यवस्थापनमा भने किन कमजोर भन्दै प्रश्न गरे।
एउटै हलमा बसाएर विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन लगाइएको भन्दै परीक्षामा सहभागी कोरोना स‌ंक्रमितले अरुलाई सारे त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै थापाले प्रश्न गरे। ‘तेस्रो लहर भनिँदै छ, दोस्रो कहिले सकियो? बालबालिकालाई खतरा छ भन्छ, कुन अध्यनयका आधारमा भन्दैछ? कतै परीक्षा रोकिएको छ, कतै सारिएको छ। खोप दिएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर, एउटै हलमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कोरोना लागेको विद्यार्थीले परीक्षा दिँदा अरुलाई सर्यो भने जिम्मेवारी कसले लिन्छ?’, थापाले प्रश्न गरे।
उनल‍े सरकार आइसियु र भेन्टिलेटरको स‌ंख्या गन्दै बसेको भन्दै जनशक्तिका बारेमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले भने, ‘हामी आइसियु र भेन्टिलेटरको संख्या गनिराख्या छौं। तर, यसले मात्र पुग्छ? जनशक्तिको तयारी के छ?’